CDMA 800MHz User — MYSTERY ZILLION
CDMA 800MHz User
CDMA 800MHz ဖုန်းတွေရဲ့ EvDO အင်တာနက်စနစ်မှာ Bandwidth ကို 128 Kilo bit per second သို့ လျော့ချကန့်သက်လိုက်တဲ့ MPT ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အရမ်းကို အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။
I think it is just you got many users in your area. Try in different location.
If that is true, good for MPT ADSL internet users because our internet has been slower than snail...
ကွန်နက်ရှင်က စုတ်ပြတ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ .. ကျွန်တော် က မြောက်ဥက္ကလာ ကနေ သုုံးနေတာပါ .. မနက် ၇နာရီလောက်ကနေ ည၆နာရီလောက်အထိက လုံးဝ connect လုပ်လို ့မရပါဘူး .. ။ ည ၂ နာရီလောက်တောင်မှ download speed က 15kbps လောက်ပဲ ရှိတယ် .. ။ အဲဒီလိုမျိုး သူတို ့က လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို ့ရလား .. ???? ။
3G evdo speed တဲ့ကြည့်ကြပါဦး
CDMA 800 MHz ဖုန်း တွေကို ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး Evolution Data Optimized (EVDO)... စနစ်နဲ့ Internet စတင်သုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ January လ ကို အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး February လကနေစပြီး ၁မိနစ်ကို ၄ကျပ်နှုန်းနဲ့ Internet အသုံးပြုခကို Prepaid Top-up ထဲမှ နှုတ်ယူတဲ့စနစ်နဲ့ အသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ Connection က သိသိသာသာ ကျလာခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းတွေဆိုရင် တော်တော်ဆိုးဆိုး ကျပြီး ညနေနဲ့ ညဦးပိုင်းတွေဆိုရင်လည်း သုံးမရအောင်ကို ဆိုး၀ါးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ည ၁၂ နာရီ ၁ ချက်လောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Download ဆွဲတဲ့အခါ 1.5 Mega bit per second အထက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 3.1 Mbps တော့ မရဖူးခဲ့ပါ။ ဘာပဲပြောပြော CD တစ်ချပ်စာလောက်ကို 45 မိနစ်လောက်နဲ့ Download ဆွဲနိုင်တော့ မဆိုးဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ နေ့ဖက် Connection မကောင်းပေမယ့် ညဖက်ကျရင် ကောင်းကောင်းသုံးလို့ ရခဲ့ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ March2(တောင်သူလယ်သမားနေ့) ညမှာ Connection ဟာ ခါတိုင်းလို 1500 Kilo bit per second (1.5Mbps) နဲ့ 2000 Kilo bit per second (2Mbps ) ကြားမှာ မဟုတ်တော့ဘဲ 128 Kilo bit per second ( 16 Kilo Bite per second) အတိမှာသာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ March6ရက်နေ့ထိလည်း 128 Kilo bit per second ( 16 Kilo Bite per second) ဆိုတဲ့ Connection ကိုမကျော်တော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ CDMA 800 MHz သမားတွေက 128 Kilo bit per second ( 16 Kilo Bite per second) ကို ၁မိနစ် ၄ ကျပ်နဲ့ပဲ အမြဲသုံးရတော့မှလား။ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ တကယ်ဆိုရင် EVDO service ကို စပေးကတည်းက Bandwidth ကို တစ်သပ်မှတ်ပဲထားသင့်ပါတယ်။ EVDO ကို စိတ်၀င်စား၊ ရောင်းကောင်းဖို့အတွက် Bandwidth အမြင့်တွေကို ၂လလောက်ပေးသုံးပြီး ရောင်းကောင်းအောင် လုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို သမာသမတ်ရှိတဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ လုပ်မှာမဟုတ်သလို ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကမှလည်း လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
This could be true. Or this is just to match new GSM phones which will use EDGE (much slower than EvDo). Or just to sell their phones at start.
A lot of people are complaining they can't connect at day time. That is because you have also of users using in your area. Each cell tower has limited numbers of connection atatime. Its like many people talking at the same time.
မာရှီရောင်း သလိုပေါ့ဗျာ . ကိုယ့်လူတို့ ကို ပထမတော့ ဆေးလိပ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ မာရှီ တစ်လိပ် ကို ရာဂဏန်း နဲ့ ရောင်းမယ် . . ဆေးလဲ များများပါတယ် . နောက်တော့ စွဲလာတော့ မှ ဖြည်ဖြည်းချင်း လျှော့ပြီး စျေးတင်မယ် .
အခု ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့လာပြီ . နောက်စျေးတင်မယ် .
ဒီကောင်တွေ ဘယ်တုနး်ကများ သူတို့ အကျိုးစီးပွားမကြည့်ဘဲ တိုင်းသူပြည်သားကို ရက်ရောခဲ့ဖူးလဲ .
ကျွန်တော် အစထဲ ကသိလို့ လျှောက်ကို မလျှောက်ခဲ့တာပါ . ပိုက်ဆံကလဲ မရှိတာပါတယ် :biggrin:
စရကာစ ကတော့ ဖုန်းလေးနဲ့ ချိတ်ပြီး . . porn ပုံလေးဘာလေး ကြည့်ကြ . ( အဲဒါကလဲ ဘာရောဂါလဲ မသိဘူး . ဗျ . ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ချိတ်တာက အဲဒီလို porn ပုံ ၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖင်ပြောင်ပုံ ကို ကြည့် ပြီ ဘေး ကဘော်ဒါကို ပြဖို့ လား မသိဘူး . တွေ့ဘူးသမျှ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးတဲ့ သူ အတော်များများ အဲဒါတွေများတယ် )
နဲ့ ပျော်စရာကြီးကို ဖြစ်လို့ . အခုတော့ . . :redface::redface::redface: . . မှတ်ပြီမလား . ကို်ယ့်လူတို့
အဲဒါ အမှန်ပါပဲ၊ 128 တောင် နပ်မှန်အောင် မရတော့ပါဘူး။
အပြောက ရွှေမန်း၊ အကတော့ ချိုမိုင်မိုင် ဆိုသလိုပါပဲ။
အစကတော့ အမြန်နှုံး သိချင်လို့ avast update (38 MB လောက်ကို ) download ဆွဲလိုက်ရင် ၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။ IDM နဲ့နော်။
အခုတော့ ၄၅ မိနစ်တောင် မပြီးချင်တော့ပါ။ IDM မကလို့ IDM ဘိုးအေကြီးလဲ မကယ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒင်းတို့ ရဲ့ အပြောတမျိုး လုပ်တော့တမျိုးကို သိထားပါလျက်နဲ့ လုပ်မိတဲ့ ကိုယ်ဆီ အပြစ်တွေပါပဲ။
ကိုယ်က ၃၀၀၀၀ကျပ် ပေးပြီး လိုင်း၀ယ်တာလေ-
သူများတွေ ကျပ် ၁၀၀၀,၀၀၀ ပေးထားရတာတောင် လိုင်းက မနပ်မှန်ပါ။
ခေတ်ဦး GSM တွေ ၀ယ်ခဲ့ရတဲ့ စျေးနဲ့ အခု ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀ တန် GSM , CDMA 800 , တောမှာပဲ ကောင်းတဲ့ တောဖုန်းကြီး ၄၉ (450) တွေရဲ့ စျေးတွေလိုပေါ့။
-တရား၀င် ၁၅၀၀,၀၀၀/ိ နဲ့ ၅၀,၀၀၀/ိ လဲ ပေးရတယ်။ ဖုန်းခေါ်တိုင်း တိုင်ကပတ်နေတယ်။
၅၀၀,၀၀၀/ိ ပဲ ပေးရတယ်။ ဖုန်းခေါ်လို့လဲ အဆင်ပြေတယ် (၄၉ မပါ)။
-၃ စက္ကန့် ကျော်ရင် ၅၀/ိ ပေးရတယ်။
၆ စက္ကန့် မှ ၅/ိ ပဲကျတယ်။ ဒီလိုပါပဲ-
ဒင်းတို့ရဲ့ မတရားတာတွေ ပြောကြမယ်ဆို ကမ္ဘာ မှာ ထုတ်သမျှ စာရွက်တွေ ကုန်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီခေတ်၊ဒီစနစ် မှာ လူဖြစ်လာတဲ့ ဘ၀ ကိုယ်ပဲ အပြစ်ပြောလိုက်ကြပါတော့။
ယောနိသော မနသီကာရ ပေါ့ဗျာ- ဟဲဟဲ
ဒါနဲ ့များ 3G(3.5 လားမသိ) တဲ့ မြန်မာပြည်ရောက်မှပဲနာမည်ပျက်တော့တယ်။ ထွင်တဲ့ကောင်သိရင် ရင်ထုမနာပဲ :P
နိုင်ငံရေးတွေမပါ ပါနဲ. ဗျာ။
ကျန်တော်တို့မှာ စုံစုံလင်လင် ဒီဆိုဒ်ပဲကြည့်စရာရှိလိုပါ။:redface:
aunggyi wrote: »
Parr parr lay par byar.. parr parr lay par...
နေရာရွှေ့သုံးလိုက်ကြပါ သူငယ်ချင်းတို ့ရယ်...out of myanmar... ....သီးခံကြပါ..သီးခံကြပါ...မေတ္တာ ထားလို ့...ခွင့်လွှတ်ကြပါ...
ရရင် ရတယ်လို ့မှတ်...မရရင် မရဘူးလို ့မှတ်ပါကွယ်.....ဖြစ်..ပြတ်..ကိုမြင်အောင်ရှု ့ကြပါ....
(ငါလေဖြစ်နိုင်ရင် အေ၀းကိုပြေးချင်တယ်..)အဲဒီ သီးချင်းလေးကို အစအဆုံးဆိုပြီး စိတ်ဖြေလိုက်ကြပါ သူငယ်ချင်းတို ့..
လိုင်းကို speed လျှော့တာကတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ တန်ရာတန်ကြေးယူပြီးပြီပဲ
အခုရက်တွေ အင်တာနက်လုံး၀ သုံးမရအောင်ဆိုး၀ါးလွန်းနေပါတယ်။
လိုင်းကြေး $1500 ပေးရပြီး လစဉ်ကြေး ၅၀၀၀၀/ိ ပေးနေရသူတွေကိုလည်း ငဲ့ကြည့်ပါအုံး။
ခုတော့ Redlink က စျေးလျှော့လိုက်ပြီ။ ၇၀၀,၀၀၀/ိ တဲ့ - လစဉ်ကြေးတော့ မသိရသေးပါ။
လိုင်းမကောင်းရခြင်းကတော့ Dos attack တွေကြောင့်ပါ။
တခြားနိုင်ငံက အဖွဲ့တွေနဲ့တော့ လုံခြုံရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေပါပြီ။
စျေးကိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဲဒီတော့မှ
လိုင်းတွေက ပက်ပက်စက်စက် မြန်လာလို့ ပိုးစိုးပက်စက် သုံးကြပေတော့-
တမိနစ်=၄ကျပ် ကို မပိတ်တော့ဘဲ အမြဲသာဖွင့်ထားလိုက်ပါတော့ ခင်ဗျား
သြော်... ပြောရခက်လိုက်ကြတာ... မတန်သေးလို့နေမှာပေါ့... လူလေးတို့ရယ်...
ကျွန်တော်သိထားသလောက်ပြောရရင်တော့ 1 Mb လို့ပြောထားတာမဟုတ်လား... ထပ်လွင့်တိုင်ကနေ 1Mb လို့ပြောထားတယ်... တိုင်တစ်တိုင်ကနေ 1 Mb ဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေလိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ... ဖုန်းတွေများလာလေ နောက်ဆုံး bit တွေနဲ့များထွက်လာမလားပဲ...
I don't think so . we also heard DDOS attack news even in 2010 . In 2011 , These kind of shit shouldn't be existed . Why they call themselves as ISP ? they don't even handle DDOS attack and hire manpower from other country. It shouldn't be . In most of case , they ever say they will proud of building with local engineers. Now Where are these local engineers ???? I am just feeding back asarole of user and all can have this kind of chance
Yes. I accepted it. They are very wicked. We cannot use online with high speed.
တန်ရာတန်ကြေးလား?........internet သုံးနေသော သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို ့ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ ့လေးပြော်ချင်လို ့ပါ၊ကျွန်တော် လွန်ခဲ့သော် ၂ နှစ်ကျော်ထဲက စကာင်္ပူမှာ 2Mbps unlimited plan ကြိုက်သလောက်သုံး ကို 19.6ssd per month =16000/ks,လိုင်းကနဦးစဖွင်တော့ 75ssd=60000/ks,စုစုပေါင်း 100ssd တောင် မကျဘူး၊sim card + modem free ရပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ ့အသိပညာ ဗဟုသုတ များစွာရရှိခဲ့ပါတယ် http://www.starhub.com/broadband.html....Phone sim card တွေကတော့ လွန်ခဲ့သော် ၁၀နှစ်ခန့်ကတည်းက မလေးရှားနိုင်ငံတွင် sim card ၀ယ်လျှင် ၁၀ရင်းဂစ်၊စသုံးရင် top up 30ရင်းဂစ်,100ရင်းဂစ်အလိုအလျှောက် ပေါင်းပေးပါတယ်....017,013 and 016 တို ့အပြိုင်အဆိုင်ပါပဲ...မယုံရင် ပုံပြင်လို ့မှတ်ကြပါ သူငယ်ချင်းတို ့...
Even in Thailand , u can use internet (unlimited 1 day ) with the cost of 50 Bahts (not more than 2000kyats) (and also u can get ur mobile number,top-upable )
and u don't need any expensive initial cost , u need to buy onlyasim card (named, Happy OR DTac ) (cost of 50 baht , again )....
I really don't understand , why don't they let them come and invest in our country ?....(like the brand,3pil , widely used in the world )...
You can't compare those countries with our Golden Land. We are Shwe. We don't need anybody's help. We do it our own way. We have our Papa China and brother N.Korea. We have all the stuffs that Southeast Asian countries don't have. Examples: All different bands of CDMA, half finished fibre optic in capital since 2010, 24/7 (24 divided by 7) water and electric city, cheap and broken traffic lights. Ohh and we are 2nd best (count from the last) in sports after Laos. So who says we are not developing?
64kbps...အထိချတယ်လို ့ထင်ပါတယ်...ဟုတ်ပါသလား၊....ကျွန်တော် ဆက်သွယ်ရေးကိုမေးကြည့်တော့...ကျွန်မတို ့ဆီကလိုင်းကပုံမှန်ပါပဲတဲ့ user တွေများလို ့လိုင်းကြတာ လို့0973000916 ကိုင်သူဆက်သွယ်ရေး၀န်ထမ်း မမ ကဖြေပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်ဆီမှာလည်း 128 kb/s မရတော့ဘူး။ 64 kb/s ကျော်ကျော်လေးပဲရတော့တယ်။ ဒါတောင် ည ၁၂ နာရီ ၁ ချက်သုံးတာပါ။ Attachment not found.
အခု ဒေါင်းနေတာ အမြန်နှုန်းက 8kp ထက်ကို မပိုတော့ဘု...
8 KB/s ကနေ 10 KB/s အတွင်းပဲရှိပါတော့တယ်။
ဖြန့်ေ၀နေတဲ့ လိုင်းအပေါက်မှာကိုက connection က နဲနဲပဲလာလို့ပေါ့။
ပေးတာနဲလို့ ရတာနဲတာပေါ့- မဟုတ်ဘူးလား.....
နောက်ဆို 128 ရဲ့တ၀က် 64 ကနေ ၊ 64 ရဲ့ တ၀က် 32KBps တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
နဂိုကတည်းကမှ ပေးချင်တာ မဟုတ်ဘူး။